Wax Waliba Aad Ugu Baahan Tahay Kulanka Galabta Dhaxmari Doona Kooxaha Elman iyo Horseed %
Wax Waliba Aad Ugu Baahan Tahay Kulanka Galabta Dhaxmari Doona Kooxaha Elman iyo Horseed
Wararka MaantaFalanqeyntaLatest Sports News
kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League ayaa galabta lagu wada inuu ka dhaco garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banadir.
kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan madaama ay labadan kooxod Elman iyo Horseed ay u oomanyihiin iney ku guuleystan horyaalka Somali Premier League oo mudo ugu dambeysay labada dhinac, balse sanadkan ayee rajo ka qaban iney hantan horyaalka.
Labadan kooxod Horseed iyo Elman ayaa waxey dheeli doonan ciyaar isla xisaabtan ah maadama ay isku dhibco dhawyihiin labadan dhinac, wuxuu kulankan noqon doona mid xiisihiisa wata.
Kooxda Elman ayaa horyaalka iney ku guuleysato waxaa ugu dambeysay sanadkii 2012-kii markaas oo lagu ciyaari jiray bacaadka garoonka Jaamacadaha, waxeyna rabta iney dib u soo nooleyso awoodii ay ku laheyd ku guuleysiga horyaalka dalka.
Wiilasha Cawo iyo maalin ayaa horyaalka iney ku guuleystan waxaa ugu dambeysay sanadkii 1980-kii wixii xiligaas ka dambeyay xalaado kala duwan ayee soo martay kooxdan, balse ifafaalada sanadkan ayaa ah mid aad u bidhaameysa oo muujineysa iney hanan karto horyaalka.
Afartii kulan ee ugu dambeyay ay labadan kooxod Elman iyo Horseed ay isku arkan horyaalka Somali Premier League waxaa labo kamid ah adkaatay naadiga Horseed, sido kale Elman ayaa kulan qora adkaatay halka kulanka kale ay bar baro ku kala baxeyn labada dhinac.
Kooxda kubadda cagta Elman kulankii ugu dambeyay waxey nus darsan goolal ugu soo adkaatay naadiga Rajo, ciyaar ku idlaatay 6-1 ay guusha ku raacday Elman Sports Club.
Wiilasha cawo iyo maalin Horseed Sports Club ciyaartii ugu dambeysay waxey bar baro goolal la’aan 0-0, ay la soo gashay Dekedaha.
Naadiga Jaalayasha ee Elman kulanka galabta waxaa dhaawac ugu maqnaanaya xidigeeda weerarka ugu ciyaara Maxamed Nuur Cusmaan, kaas oo dhaawac ku seegaya ciyaartan.
Kooxda Horseed dhamaan xidigaheeda waa u taam waxeyna diyaar u yihiin iney la dagaalaman naadiga Elman.
Is Araga Labadan Kooxod:
13/02/2019 Horseed S.C 0 : 0 Elman FC
26/04/2019 Elman FC 2 : 1 Horseed S.C
22/03/2018 Horseed S.C 2 : 0 Elman FC
10/05/2018 Elman FC 2 : 3 Horseed S.C
Kooxaha: Elman Vs Horseed
Tababare Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Real Sociedad ee Copa del Rey
Pep Guardiola Oo Sharraxay Isbeddelka Ku Dhici Doona Barcelona Hadii Ka Tago ..